AMD inoramba ichipa paLinux Kernel uye iri kushanda paKernel 4.20 | Linux Vakapindwa muropa
AMD inoramba ichipa paLinux Kernel uye iri kushanda paKernel 4.20
AMD yatove kushanda paLinux Kernel 4.20 iyo iyo yakatanga kuendesa mitsara mizhinji yekodhi kune iyo nyowani Linux Kernel mukuwedzera nekuenderera mberi nekupa kune Yemahara software.
Tichifunga nezvese nyowani zvigadzirwa zvemagetsi zvakauya muLinux kernel munguva pfupi yapfuura, pamwe nekusunungura AMDGPU DDX 18.1 uye kuburitswa kukuru kweROCm 1.9, batch rako rekupedzisira reshanduko shanduko rakaitwawo DRM-Inotevera pamberi peLinux Kernel 4.20 ~ 5.0 kutenderera.
Iyi ichave imwe inonakidza vhezheni yeRadeon Linux vashandisi.
Kunze kweizvi Michael larabel kubva kuPhoronix akaita ongororo kwaakapa nhoroondo dzebasa rakaitwa kune vakasiyana vakatsigira, kunyanya vagadziri veGPUS.
1 AMD inopa 8.5x yakawanda kodhi kuLinux kernel kupfuura NVIDIA
2 AMD iri kugadzirira zviwanikwa zvakawanda zveKernel 4.20
AMD inopa 8.5x yakawanda kodhi kuLinux kernel kupfuura NVIDIA
Kunyange zvakadaro haifanire kunge iri kushamisika kukuru, tichifunga rese basa AMD rave kuita pane rakavhurwa sosi giraidhi stack munguva pfupi yapfuura.
Nguva NVIDIA ichiri kupa zvishoma zvishoma (kutaura zvishoma) yakanangana neLinux kernel, AMD inouya neanopfuura kasere mitsara yakawanda yekodhi yakawedzerwa kune kernel ichienzaniswa neNVIDIA.
Vagadziri ve AMD vakapa 2.168. 104 mitsara yekodhi yeLinux kernel, 414.761 mitsara mukuita, kana mambure kuwana 1.753.343 mitsara yekodhi.
NVIDIA, zvisinei, yakapa mitsara inokwana makumi matatu nemakumi matatu neshanu yekodhi kuiyo kernel uye ndokubvisa 303.180, kana mambure ekuwana chete 97.197 205.983 mitsetse yekodhi.
Mipiro ye AMD kuKernel inosanganisira akasiyana mabasa e AMD CPU / chipset pamwe ne zvinhu zvacho uye Vhura sosi AMDKFD / AMDGPU / Radeon mifananidzo madhiraivha uye inoshanda inoenderana neTTM memory management, main DRM, nezvimwe.
AMD iri kugadzirira zviwanikwa zvakawanda zveKernel 4.20
Basa rakatumirwa naAlex Deucher kubva ku AMD rinosanganisira:
Pakutanga rutsigiro rweAPU Picasso mifananidzo inomirira kuburitswa.
AMD APU dzakangovhura avo AMDGPU tokeni eaya maVega / GFX9-based APUs kutanga kwevhiki.
Isu tinoramba tichishanda mukugadzira iyo inonakidza Vega 20, iyo inofanirwa kunze kupera kwegore.
Zvinotaridza kuti neiyi inouya kernel kuburitswa, iyo Vega 20 rutsigiro ichaongororwa zvese uye mune kumira kwakanaka munguva yekutanga. Zvinotarisirwa kwese kuti iyi yekutanga Vega 20 GPU ndeye 7nm chigadzirwa chebasa.
Inoenderana neVega 20, AMDGPU ikozvino ine yekutanga xGMI rutsigiro mukati memutyairi wetsanga.
XGMI iko kubatana kutsva uko Vega 20 uye ramangwana maGPU anotsigira senge imwe nzira kune PCI Express 3.0 / 4.0.
Iyo AMDKFD kodhi iri kubatanidzwa muiyo AMDGPU kuti ive kernel module.
Basa rinoratidzika kunge risina simba rekupedzisira manejimendi rinoenderera mberi nekutenderera uku, kugadzirisa ACP yemagetsi kukwidziridzwa uye nedzimwe shanduko.
Pane huwandu hwakanaka hwerutsigiro rwekuratidzira futi, kusanganisira ABGR / XBGR rutsigiro, DisplayPort YCbCr rutsigiro mukodhi DC kuratidza, LVDS rutsigiro muDC kodhi, nyowani yekugadzirisa mamiriro uye rimwe basa
Tsigiro yechiedza redefinition yemumvuri nekuuraya kuuraya kweGFX / Compute.
VCN JPEG injini inotsigira Raven Ridge APUs uye nyowani. Zvakare kumberi kweRaven ndiyo DMCU firmware yekumira yakamira.
Raven Ridge APU ikozvino zvakare ine GFXOFF rutsigiro kudzima injini yemifananidzo painenge isingadiwe uye kutsigira stutter mode.
Tsigiro yemutoro kuenzanisa mukati meiyo AMDGPU / DRM scheduler uye kuishandisa kwayo kwemaitiro ekuronga.
GPUVM chaiyo yekurangarira mashandiro ekuvandudza. Kune zvekare kumwe kugadzirisa kubata kwekuvandudza kune iyo GPUVM LRU.
Iko kune zvekare zvimwe zvekugadziriswa kweTTM uye rutsigiro rwekufamba kukuru mukati meiyo memory kodhi kodhi.
Pakazara, kwave kuri kubatikana kutenderera kwevagadziri ve AMD kugadzirira Vega 20 rutsigiro uye zviwanikwa zvine hukama, senge xGMI, kuwana rutsigiro rwekutanga Raven2 uye Picasso mifananidzo, ichiri kuvandudza manejimendi emagetsi uye iyo AMDGPU DC, kuwedzera kune mamwe mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AMD inoramba ichipa paLinux Kernel uye iri kushanda paKernel 4.20
Joplin, ramangwana rinotsiva Evernote yeGnu / Linux
Iyo itsva vhezheni yeHondo yeWesnoth 1.14.5 yakatoburitswa